Ikhaya - Forex Lens
Iso Lakho Likumamaki.
Thola i-EDGE yakho yokuhweba.
Buka, Funda, futhi PHAMBILI Ndawonye
nomphakathi wethu wokuhweba ngaphakathi kwe-
Igumbi lokuhweba le Forex nesiphakeli se Discord
I-PRICINGJOYINA IDISKHODI (MAHHALA)
Joyina igumbi lethu lokuhweba le-Forex elingenakulinganiswa
lapho sisakaza khona LIVE nsuku zonke
ukukunikeza ukuhlaziywa kwemakethe bukhoma
& nemibono yokuhweba ngesikhathi saseNew York
& kanye/noma amaseshini aseLondon.
IMIBONO Yansuku zonke yokuhweba
Thola UKUHLELA ukufinyelela ngaphezulu Abahlaziyi abane bezobuchwepheshe usuku ngalunye lwe-Q & A, impendulo nge
imibono yakho yezohwebo, nezixwayiso zamasethaphu wokuhweba okungenzeka kakhulu
ukubheka emakethe ye-Forex & Crypto.
Ngekhofi nje ngosuku! Qalisa Namuhla
Thola ukufinyelela kumtapo wezincwadi wamahora angaphezu kwama-100 wamavidiyo.
Sifundisa amasu okuhweba aqinile ukunikeza abahwebi i-REAL EDGE ekuhwebeni izimakethe.
Intengo YobulunguSijoyine ku-Discord
Iso lakho Ezimakethe. Thola i-EDGE yakho yokuhweba ku-Forex.
Bukela, ufunde, futhi uzuze kanye nomphakathi wethu wokuhweba ngaphakathi kwegumbi lokuhweba le-Forex Portal ne-Discord server
Joyina igumbi lethu lokuhweba le-Forex elingenakulinganiswa lapho sisakaza khona NGOKUPHILA kaningi ngosuku sikunikeza ukuhlaziywa kwemakethe bukhoma nemibono yokuhweba phakathi nezikhathi zeNew York naseLondon.
Thola ukufinyelela kwe-DIRECT kubahlaziyi abangaphezu kwabangu-4 bezobuchwepheshe usuku ngalunye lwe-Q & A, impendulo ngemibono yakho yezohwebo, kanye nezixwayiso zamasethingi amakhulu wokuhweba ongawafuna emakethe ye-Forex ne-Crypto.
Thola ukufinyelela kumtapo wezincwadi wamahora angaphezu kwama-100 wamavidiyo. Sifundisa amasu okuhweba aqinile asebenzayo futhi anikeze abathengisi i-REGE EDGE ekuhwebeni izimakethe.
Umphakathi Wangempela Wokuhweba
Abathengisi abakhulu bahweba lapha, nokuthi uhweba nobani ngezindaba
Joyina umphakathi wabahwebi bangempela futhi uzungeze nenkampani enhle. Esigxile kakhulu kukho ukukusiza ukuthi uthuthuke, futhi uthathe ikhono lakho uliyise kwelinye izinga ukuze ube umhwebi ongcono, onenzuzo enkulu.
Ukusakaza bukhoma kwansuku zonke & Ukuhlaziya Market
Ukuhlaziywa kwemakethe ebukhoma nezikhathi ze-Q & A nabahlaziyi bethu bezobuchwepheshe
Sisakaza BUKHOMA nsuku zonke phakathi neseshini yaseNew York kanye/noma yaseLondon, sikunikeza ngokuhlaziywa kwemakethe okubukhoma ezimakethe ze-Forex kanye ne-Crypto. Amalungu angabuza imibuzo futhi acele ukuhlaziywa phakathi nalezi zikhathi.
Imibono Yokuhweba Enenzuzo & Ukusetha
Qinisekisa ukuhlaziywa kwakho ngemibono yethu yokuhweba nokuhlaziywa
Abahlaziyi bethu abakhulu bathumela imibono yokuhweba okungenzeka kakhulu besebenzisa izindlela ezifakazelwe ukusiza ukuqinisekisa ukuchema kwakho kanye nokuhlonza nokusebenzisa amathuba okwenza inzuzo ezimakethe.
Ukuhweba okuphelele kukhonjwe namuhla ekuseni! Amaseshini ethu abukhoma…
January 26, 2022/by Forex Lens Izindaba
Isicelo sokusetha uhwebo ku-AUDNZD selungu sizuze…
January 25, 2022/ngo-forexlens
Ungathengi I-Dip ku-BTCUSD okwamanje! Kunezinkulumo mpikiswano...
January 24, 2022/by Forex Lens Izindaba
Sibonise ukuthi inzuzo ye-BTC emakethe yamabhere ingafinyelelwa! Sine…
January 21, 2022/by Forex Lens Izindaba
Amasu okuhweba osuku bekugxilwe kuwo namuhla, futhi sethule zombili…
January 20, 2022/by Forex Lens Izindaba
Izindlela zokuhweba zesikhungo bekugxilwe kuzo kuseshini yanamuhla.…
January 19, 2022/by Forex Lens Izindaba
Wonke amasu emali kumapheya amadola azuziwe! DXY...
January 18, 2022/by Forex Lens Izindaba
Amathuluzi abalulekile e-Smart Money ahlanganiswe eNew York yanamuhla…
January 17, 2022/by Forex Lens Izindaba
Ukuthenga kwethu kwe-BTC kwenziwa kwasebenza ngesikhathi seseshini ebukhoma lapho isikhathi sethu esifushane…
January 14, 2022/by Forex Lens Izindaba
Amasu ethu okubuyisela emuva aqale ukusebenza ngokusemthethweni izolo...
January 13, 2022/by Forex Lens Izindaba
Yiziphi izimfihlo zokuhweba ze-GMT? Kuhlobene nesikhathi, yebo,…
January 12, 2022/by Forex Lens Izindaba
Amasu emali yanamuhla athonywa uSihlalo Wenhlangano…
January 11, 2022/by Forex Lens Izindaba
Yini Esohlelweni Lwakho
Sizokufundisa ukuthi ungakwenza kanjani
Thatha ukuhweba kwakho kufinyelele ezingeni elilandelayo
Funda ukuthi ungaba kanjani umhwebi onenzuzo enkulu namuhla
Thatha amakhono akho okuhweba aye ezingeni elisha ngokuphelele. Bheka okwethu…
April 2, 2021/ngo-forexlens
Uma ulwandle olubushelelezi lungazange lwenze itilosi elinamakhono, khona-ke imakethe ebushelelezi…
January 13, 2021/ngo-forexlens
Uma Umcabango Uheha Lokho Okuqondiswe Kuwo, lapho-ke sine…
November 3, 2020/ngo-forexlens
Njengoba u-Alan Watts omkhulu ake wathi:
Le yimfihlo yangempela…
October 14, 2020/ngo-forexlens
”Angikwazi ukukala Forex Lens phezulu ngokwanele! Insizakalo ekhanyayo, uhlala ukhona uma unemibuzo futhi uthola izeluleko zochwepheshe! Ukuhlaziywa okuhle kwezimakethe! Ngokuqinisekile unolwazi oluningi ngokulandela usizo nezeluleko. Ungancoma kunoma ngubani ofuna ukuthola ulwazi oluthe xaxa futhi abe ngumhwebi ku-forex. ”(2021)
UJay H.Ilungu lePro Trader
”Ngiyabonga Institute Trader. Ungumhwebi ohamba phambili kunabo bonke engake ngahlangana nabo, hhayi nje ngenxa yekhono lakho kodwa ngenxa yokuzinikela kwakho kubafundi bakho. ” (2020)
UShirvan S.Ilungu lePro Trader
”Ngisebenzise izinkulungwane zamadola mhlawumbe, ngonyaka odlule ngithola umhlinzeki wesevisi omuhle wesiginali ye-forex. Kuhle ukuba nezinhlobonhlobo ezinkulu zamabhangqa mhlawumbe angibheki isikhathi esinikeziwe, futhi kuhle njalo ngezikhathi ezithile, lapho ngisebenza ngokufana ncamashi nenye yezimpawu zokuhweba. Uhlobo lokuqinisekisa engikucabangayo. ”(2017)
UJeff W.Ilungu lePro Trader
" Ukuthanda isipiliyoni nokuthi konke kucace kanjani. Ukuhlanganiswa okuhle kwethalente nokwabelana ngolwazi. Ilawulwa kahle. Njengomsebenzi. Qhubeka njalo bafo! ”(2020)
UKaushal G.Ilungu lePro Trader
” Ifanele yonke isenti. Ngangimusha kahle ekuhwebeni ngenkathi ngijoyina igumbi labo lokuhweba. Ngisebenzisa isu lesenzo senani le-crypto futhi futhi lisebenza kahle kakhulu. Ngincoma kakhulu Forex Lens kunoma ngubani oqala nje ukuhweba. Kubonakala sengathi nabo banezinto eziningi ezithuthukile manje nabathengisi abaningi abahle ekuxabaneni okuhle. Nginikeza impumelelo yami enkulu kubo! ”(2020)
UDoris B.Ilungu lePro Trader
Funda ukuthi ungathengisa kanjani i-Forex kusuka ku-A kuye ku-Z
Imfundo Yezokuhweba ye-Forex
Ungazisebenzisa kanjani Izimpawu Zakwa-Forex Indlela Eqondile
Mashi 18, 2020/ngu-Op Ed
Umhlaziyi wezobuchwepheshe ephaketheni lakho
Sebenzisa ulwazi lwabahlaziyi bethu bezobuchwepheshe futhi ulandelele ngokushesha ukufunda kwakho. Sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani umthombo ongaguquguquki wemali ngokuhweba nge-Forex ngamasu ethu okuhweba nokuphathwa kwezinhlekelele.
Yonga Isikhathi Kumashadi!
Gcina amahora amaningi uhlaziya amashadi azingela ama-setups wokuhweba okuhle. Sithola imibono yokuhweba enenzuzo ongayihlaziya. Thola isikhathi sakho emuva. Inkululeko yezezimali yinkulu, kepha inkululeko yesikhathi iyikho konke.
Imibono Engaphezulu Yezokuhweba - futhi Ngaphansi!
Thola ukufinyelela hhayi ku-1 kuphela, kodwa abahlaziyi bezobuchwepheshe abaningi abanamasu ahlukene okuhweba (njenge-Smart Money) ukukusiza ngokuhweba kwakho - futhi kancane kakhulu!
Bhekani, nifunde futhi nenze inzuzo ndawonye
Ukuwohloka kokuhlaziywa kwemakethe okugcwele, imibono yokuhweba, ngezikhathi ze-Q & A - nsuku zonke! Funda ukuthi ungakhulisa kanjani onqenqemeni lwangempela ekuhwebeni ngezindlela esizifundisayo. Uzoba ngumhwebi oqeqeshwe ngokwedlulele futhi oyindilinga uma usuba yiPro Trader!
Funda endaweni engenangozi
Qala idemo yokuhweba endaweni yokuhweba engenabungozi ngenkathi ufunda. Ungakwazi ukucija amakhono akho okuhweba ngaphandle kokukhathazeka ngokulahlekelwa yimali yangempela. Ukuhweba kuyikhono lamakhono elingakukhokhela impilo yakho yonke.
Iqembu Elisekela Amakhasimende Lonke
Xoxa nethimba lethu noma kunini ku I-Discord noma usithumele i-imeyili ngemibuzo yakho, impendulo kanye nokukhathazeka ku- [i-imeyili ivikelwe]. Sihlale silapha ukusiza ngohambo lwakho lokuhweba.
Thola ama-imeyili nsuku zonke kulokho esikubonayo emakethe ye-Forex
Ukuhweba Okuphelele + Faka Ikhandlela Elingaphakathi
Isicelo Sokusethwa Kwezohwebo Sishaya I-TP1 + I-DXY Rally Iyaqhubeka
Ungathengi I-Dip Okwamanje + DXY Thenga Amamodeli Acushiwe
Inzuzo ye-BTC Emakethe Yebhele + EURUSD, USOIL, Izinzuzo zeGOLD
Amasu Okuhweba Osuku + Izinzuzo Ezingaguquki ZEGOLIDE
Amasu Okuhweba Esikhungo + Okuhlosiwe kwe-NZDUSD Kuvuliwe
Amasu Ohlobo Lwemali Azuziwe + I-BTCUSD & USOIL Okuhlosiwe Kuhit
I-Smart Money Premium Concepts + Isu LEGOLIDE
I-BTC Thenga Icushiwe + I-Market Outlook Yeviki Elizayo
Amasu okubuyisela emuva ku-Effect + BTCUSD Ukungalingani
Izimfihlo Zokuhweba Kwembulwa + IGOLIDE & USOIL Okuhlosiwe Hit
Amasu Ohlobo Lwemali + I-Crypto Bears Still Shredding
Ikhasinkomba 1 of 50123>»
Ikhasinkomba 1 of 199123>»